Enye inkinga lalivamile ngesikhathi ukhulelwe nokuguqulwa kwesisu ekukhulelweni ekuseni. Isizathu singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela kwezinso fetus isifo unina. Ukuphuphuma Kwesisu amasonto 20, kaningi, owesifazane unika izinkinga kancane kokubili imigomo buyinkimbinkimbi, kwenzekani ngemva kwalolu suku.
Ngokwezibalo, lesi simo, njengoba isisu nokuguqulwa kwenzeka kuzo zonke abakhulelwe 6th. Odokotela evamile ukubona izinhlobo eziningana zazo. Ngakho, ezisengozini isisu, noma usongo kwesisu, libhekene lesizalo ukopha engaqinile kanye nezinhlungu ezincane esifundeni lumbar we abakhulelwe. inqubo enjalo kubhekwa ukwelashwa esifike ngesikhathi nokukhulelwa awushintsheki futhi kungaba kamuva ukuthuthukisa ngaphandle kwezinkinga.
Ngaphezu kwalokho, kungase waqala kwesisu nokuguqulwa. uphawu Its main - ukopha kuyinto kakhulu indawo ngeminjunju eqinile. Ezimweni ezinjalo, ukwelashwa ngokushesha esibhedlela, njengoba ebingasongela hhayi kuphela izithelo zokuphila, kodwa futhi unina. Ngesikhathi esifanayo, kwezinye izimo, it has ithuba ukuqhubeka ukukhulelwa.
Ukukhipha isisu kuyaqhubeka noma okuseduze kwenzeka esimweni lapho iqanda avundiswa uyashiywa odongeni lesizalo bese eqala uxoshwe yayo kusukela ingaphakathi. Owesifazane ngako kulendzaba kusho kwati cramping, ngokuvamile ukopha. Lesi simo siholela isisu. Ezimweni eziningi kudingeka usizo lwezempilo kuhlinzwa ukusula kwesibeletho we izinhlayiya, okuyizinto kungathintekanga.
Kunezizathu eziningana ukuthi kungenzeka kwesisu nokuguqulwa. Phakathi kwabo izisu, enziwe ngaphambi ukuthi (ikakhulukazi ezimweni lapho sokukhulelwa waba ngowokuqala), span isikhathi eminyakeni engaphansi kwemibili phakathi ukukhulelwa, ezinkulu umsebenzi umama okhulelwe, ukucindezeleka, izifo ezibangelwa ufuzo noma izifo ezithathelwanayo. Ngaphezu kwalokho, Rhesus ukungqubuzana singenzeka (ukungavumelani phakathi kukamama kanye nengane), lokhu kwenzeka kaningi uma abazali babe izinkawu ezihlukahlukene.
Bandise amathuba okuba lowo kungenzeka kwesisu nokuguqulwa, iziyaluyalu hormone kwabesifazane. Lokhu kusho ukwehluleka luteum Corpus emzimbeni kamama esizayo futhi ngokweqile testosterone, i-hormone wesilisa. Nge ekuhlonzweni, ukuphathwa ezinqunyiwe, elungisa le nkinga. Ezimweni ezingavamile, izimbangela zezinkumbulo isisu yemvelo ingase inganeli kungaziwa ukuthi kanjani.
Futhi nezici eziyingozi kungase kube engu-abazali neminyaka engaphezu kwengu-35, umsebenzi umama esizayo ezindaweni eziyingozi, lapho kuyadingeka ukuze donsa kumakhemikhali ayingozi, ukuhlukumezeka ngokomqondo noma ngokomzimba. Abesifazane abaye kwesisu kufanele enze ukuhlolwa njengoba egcwele ngaphambi uhlela akhulelwe, hhayi ukuphinda esimweni esingajabulisi.
Kukhona izimpawu eziningana ukuthi kumele kube ibhaxa ukuze qiniseka ukuba afune usizo lwezokwelapha. It ukopha ngisho ezincane ekukhulelweni ekuseni (emva amasonto 20, kaningi uma waqala kwesisu nokuguqulwa angahoxisa amniotic fluid, njengokungathi lokuzalwa evamile), izinhlungu abukhali esiswini noma esifundeni lumbar. Kumele kukhunjulwe ukuthi nge ukwelashwa esifike ngesikhathi yokubonisana, kungenzeka ukuqhubeka ukukhulelwa futhi kamuva ugweme le nkinga.
Ezimweni lapho kwesisu akusho kwenzeke, akufanele sicabange ukuthi ukukhulelwa olandelayo kungase kuphumele. Into esemqoka ukuthi kudingeka kwenziwe - ukuhlonza isizathu esenza kube kuhle okwenzekile. Ngemva ukuqedwa yayo, uzohlala amathuba amancane kakhulu ukuphinda nenkinga enjalo.
Indlela babe ngokushesha 39 Emasontweni onke okukhulelwa? Ukuzalwa ubheke leli sonto lama-39 okukhulelwa
Thina ukuhlola izikhala entsha, noma kanjani ukudlala eMpini Thunder amathangi